Mana Nuyi ti Qulqullummaa Waaqayyo! | Aarsaa ramo Kakuu con i Ministeri del Nuovo Patto
Jalqaba Jecha yoo come la materia durée manna jedhu come irraa fudhannee ilaalle: Mana jechuun può in pace, horiin, yookiin meeshaan keessa jiraatu fudhachuu Jenne è dandeenya. Yeroo Jecha mana jedhu kanatti qulqullummaa jechi jedhu dabalame, akkuma beekamu hikaan isaa ni jijjirama.
Mana qulqulummaa jechunis wanti qulqulluun tokko kan keessa ka’amu yookin keessa jiraatu jechuudha. Manni qulqullummaa kun immoo itti gaafatummaa fi abbummaan kan Waaqayyo o akka ta’e waliin ni hubbana. Maaliif jenne yoo gaafannee ‘ani qulqulluudha’ jedhe ofi isaaf kan dhugaa ba’e Waaqayyo qofa waan ta’eef. Haa ta’u malee Waaqayyo akka isaatti qulqulluu akka tanu yeroo hundumaa ni barbaada. Ani Akka Kanaaf qulqulluu una e Isinis qulqulloota Ta'a jedhe kan nu abboomeef.
Hafuurri Waaqayyo yoo dhuguma ISIN keessa jiraate, Malee hafuuraatti Akka akka isin feedha fedha foonitti tempo jiratan; namni hafuura Kristos del prezzo keessaa qabne nazionale Kristos miti (Roma 8:9). Garu isin questo Akka non qulqulluummaa Waaqayyo taatan, hafuurri Waaqayyoos akka isin keessa buufatee jiru hin beektanii ree? (1Qor. 3:16).
Hafuura kanas Waaqayyo biraa argattan; ISA hafuura non qulqulluummaa Mission taatanii, isin kan ofii keessan miti. Waaqayyo gatiidhaan isin bitate; kanaaf guutummaa dhagna keessaniin waan inni ittin galateeffamu hojjedha! (1Qor.6:19-20). Foon keenyaa, jireenyi keenyaa mana qulqullummaa Waaqayyo Ta'u su ISAAA barree qulqulluummati akka eegnu, kan all'interno cane nuuf kennee Maan lupo isaaf chiave Trova il dollaro qulqulluun na haa Gargan.
Mana Nuyi ti Qulqullummaa Waaqayyo! — 4 Commenti
Addisuu Baqqalaa il luglio 18, 2015 alle 10:15 alla scrive:
deriba fufa il maggio 10, 2015 alle 6:44 alla scrive:
deriba fufa il maggio 10, 2015 alle 6:38 alla scrive:
Bultuma Itana il marzo 12, 2015 alle 5:39 alla scrive: